मुस्ताङमा एकसाथ यस्तो अवस्थामा भेटिए रुपा र यान्चुलाई !!! - Staronlinemedia.com
मुस्ताङमा एकसाथ यस्तो अवस्थामा भेटिए रुपा र यान्चुलाई !!!
March 15, 2019 | Gyanlama | 5:17 am
म्हेन्दोमाया सांगीतीक क्षेत्रका नायीका तथा गायीका रुपा एस घलेको “डम डम डम्फु” बोलको गीतको म्युजिक भिडियो हालै सार्बजनिक भएको छ । पछिल्लो समय म्युजीक भिडीयो र चलचित्रमा निकै व्यस्त वन्दै गएकी नायीका तथा गायीका घलेको यो सेलो गीतको पहिलो म्युजीक भिडीयो हो । नेपालको रमणीय क्षेत्र मुस्ताङमा सुटिङ भएको यस गितमा चर्चित म्हेन्दो माया गायीका मिना लामाको शब्दमा तथा संगीत रहेको छ । यस गीतलाई नायीका तथा गायीका घलेले एकदमै सुरिलो अवाजमा आफ्नो स्वर भर्नुभएको छ भने उहाँलाई साथ दिनुभउको छ गायक रोम लामाले ।
सेलो विटमा सृजित यस गीतलाई कमल सौरागले एरेन्ज गनर््भएको छ भने काठमाडौँ डिजिटल बाट यो गित रेकर्ड गरिएको छ ।
“डम डम डम्फु” बोलको गीतलाई नायीका तथा गायीका घलेले मुस्ताङ्को सुन्दर तथा रमणीय स्थलहरुमा निर्माण गर्नुभएको छ । सम्भवत यो सेलो गीत मुस्ताङमा छायंकन गरिएको ईतिहासमै पहिलो पटक हो । नायीका तथा गायीका घलेलाई यस भिडीयोमा साथ दिनुभएको छ, यान्चु तामाङ्ले । नायीका तथा गायीका घले र यान्चुले निकै मेहनतका साथ यस भिडीयोमा अभिनय गर्नुभएको छ । लामा भाईको छायंकन रहेको यस म्युजीक भिडीयोलाई सानु हबिकले आधुनिक ड्रोंन घुमाई भिडियोलाई अज अव्वल वनाउन सहयोग गर्नुभएको छ । यस भिडियोलाई जोन राईले सम्पादन तथा निर्देशन गर्नुभएको छ ।
“रुपा एस घले अभिनय र गायिकी दुवै क्षेत्रमा उत्तीकै अव्वल छिन, उनीले यस भन्दा अगाडी आधी दर्जन वडी म्हेन्दो माया गितहरु गएकी छिन । उनीले पहिलो म्हेन्दो माया अवार्ड र दोस्रो म्हेन्दो माया अवार्ड समेत हात पारेकी थीइन भने पछिल्लो पटक हिमालयन इन्टरनेशनल नेपाली अवार्ड समेत लिन सफल भएकी थिइन्, उनि दुई ओटा चलचित्रमा समेत अभिनय गरि सकेकी छिन ।